K: မိုးမလင်းမီ ရွာလမ်း
မိုက်တယ်ဗျာ....ဆိတ်ဖလူးနံ့လေးတွေကို သင်းလို့ :)
လမ်းက ရဲရဲတိုးနေသူတွေ အတွက် ရှိပြီး ရောင်နီက ကြိုနှင့်မှာပါ.မိုးမလင်းသေးမီ ရွာလမ်းလေးထဲ
ဆိပ်ဖလူးနံ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းများ ရှုရှိုက်သွားပါတယ်.
တောခွေး ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး ... လင်းဒတွေ၊
ကဗျာလေး အရမ်းကောင်းပါတယ် ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူး။
essay ထင်လို့ လာဖတ်တာ။
ကျွန်မလည်း စကားပြေထင်ပြီး ရောက်လာတာ ကဗျာဖြစ်နေတယ်။ ကဗျာလည်း ဖတ်လို့နားလည်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ကဗျာဖြစ်နေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မိုးတော့ လင်းဦးမှာပါ အစ်မရေ ..
Love the poem! Hopeagood morning will come shortly!
စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဆိတ်ဖလူး တမာ ညမွှေးပန်း
ဧကရာဇ် ရနံ့မျိုးစုံ သင်းထုံတဲ့ အေးချမ်းသာယာတဲ့ ရွာလမ်းလေးပါ
လက်တွေ့ကတော့ ဂေါ်ဇီလာ ဂျမ်ဘို စပိုက်ဒါ ရနံ့မျိုးစုံ နံစော်ပြီး အော်ဂလီဆန်စရာကောင်းတဲ့ သွေးစုပ်ကောင်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘ၀တွေပါ ကေကေ ရာ
တရွာလုံး ဆိတ်ဖလူးရနံ့တွေ သင်းသတဲ့လား... :(
သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ မကေ ရေ
မျက်စိထဲမှာ တကယ့်ကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်